အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပုံရှာနည်း (Google Images) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပုံရှာနည်း (Google Images)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Nov 21, 2012 in Computers & Technology | 10 comments
ဟင်။ ပို့(စ) ကိုဖတ်တာ နောက်ဆုံးရောက်တဲ့ အချိန် ဒွေး ပုံနဲ့ ရှုခင်း စိမ်းစိမ်းလေးတွေပဲ မှတ်မိလိုက်တယ်။ ဒီ ဦးနှောက်ကတော့။
အဲဒီ ရှုခင်းပုံလိုချင်တဲ့အချိန်မှ ပြန်ရှာမယ်။ ကျေးဇူး မောင်အံစာ။ :hee:
ဂလိုဘာ ခည ..
ဒွေပုံတွေ ပါဒါက Google Images မှာ mandalaygazette လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရင် …
ပထမဆုံး စာမျက်နှာမှာကိုက အိုက်ဂလို ပုံဒွေ ပါဒါ ဖစ်ဘာဒယ် ခည …
ပထမဆုံး လာရောက် အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ …
တအား ပညာသာ ပါတဲ့ Tutorial မဟုတ်ပေမယ့်…..
အချိန်ပေးပီး သေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ရေးထားတာကို လေးစားပါတယ်……..
ဂေးဇက်နဲ့ဒွေးနဲ့အခုအချိန်ထိ ဆက်နွယ်မှူရှိတာကတော့ အံ့သြစရာပါပဲ…..
သဂျီးခင်ဗျ…. ကွယ်လွန်သွားသူ ဒွေးနဲ့မည်သို့ မည်ပုံ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုထားသောကြောင့် အခုအချိန် ပတ်သက်မှူရှိနေတာလဲဆိုတာကို ဘူးပါရစေ… အဲ့လေ ဗျူးပါရစေ……
တမီးပုံကော ရှာလို့ရလား ကိုကိုအံ … အဲဒါဆို ဘယ်လိုရှာရမလဲ …. တင်ပေးဦးနော် …….
မာမီ ရှာနေနဲ့ …
သားသား ချာပေးမယ်နော် ..
အဲ .. တွေ့ပီ .. ဒီမှာ .. မာမီ ပေါ့ကော …
မခိုင်ပုံကို ကွက်တိ ရှာနိုင်တယ်
ချီးကျွေး အဲလေ ချီးကျူးတယ်ဟေ့
ငယ်ငယ်တုံးကတော်တော်ချောခဲ့တာနော် … အခုမှ အဲလိုဖြစ်တွားတာ ………..
ကွန်ပြူတာ ၀ လုံးတန်းအတွက် အတော်လေး အဆင်ပြေလို့….
နောက်၎နှစ်သက်တမ်းတော့ အိုကေ သွားပြီ။